အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: စကားပြောတဲ့ ဖားကလေး
15 Responses to “စကားပြောတဲ့ ဖားကလေး”
ကျနော်တို့က ငယ်ငယ်လေးပဲ ရှိသေးတာလေ အမရဲ့
အဖိုးကြီးကတော့ သူ့အကြောင်းသူသိမှာပေါ့း)
နမ်းရင်လည်း ဖားတောင်မရှောင်ဘူး ဖြစ်အုံးမယ်။
တလွဲမတွေးပါနဲ့ သူလည်း အိပ်ယာလေးနဲ့ အိပ်ချင်ရှာမှာပေါ့ ဟဲဟဲ
အခုနေများ လာမေးလို့ ကတော့.. ဟွန်း.. ဘာပြောကောင်းမလဲ..နမ်းတာပေါ့... နော့...။ ရွံတတ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း ပေါ့ :P အသက် ၇၀ ကျော် အဖိုးကြီးဖြစ်သွားရင်တော့...
အင်းလေ.. အသက်ကြီးလာတော့လဲ စကားပြောဖော်လေးရတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။
ကျန်တာ ဘာမှမှ မလိုတာ။ :P ဒိထက် အသက်ကြီးလာရင်တော့... အဟဲ.. ပြန်နမ်းရတော့မယ်။
တမျိုးမတွေးနဲ့ ဦး... အသက်ကြီးလာတော့ ဆေးပေးမီးယူ.. လိုလာတယ်လေ။
“ နေပါစေ… မိန်းမတစ်ယောက် ရှိတာထက် စကားပြောတတ်တဲ့ ဖားတစ်ကောင် ရှိတာက ပိုပြီးကောင်းလိမ့်မယ်တဲ့…………………” :)
ကျနော့်အထင်ကတော့ ဒီအဘိုးကြီး မိန်းမတွေအကြောင်း တော်တော်သိထားလို့နဲ့ တူတယ်နော် အမ။းဝ(
(လိုသလို ဖြတ်ပြီး တွေးသွားသည်)။
လိုရင် နမ်းမယ်နော်...လို့ ပြောလို့ရမလား..ဟီး။
မလိုတော့ရင် စကားပြောဖော် ဖား လေးပဲ ပြန်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ. . .
( ထမင်း ၊ ဟင်း ချက် ၊ အဝတ်လျှော်ပြီးရင် ပြောပါတယ်....ဟီး။ )
ကျန်တာကတော့ ကျနော် နက်ထဲဝင်နေလို့ သူက ဘေးကနေ နားပူနေမှာ စိုးလို့ :P
ဖားကလေးတွေကို ငရုတ်သီး နဲ့ ကြွပ်နေအောင်ကြော် စားရင် သိပ်ကောင်းဆိုပဲ...း )
if i were that old man, i will if my son refuse to kiss, and i know exactly what my idiot son likes. after all, he will understand i kissed the frog and he kisses the bride and live happily ever after.
အဖြေက ပုံပြင်ထဲမှာပါပြီးသားလေ... အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါ၏... သတို့သမီးရှာတဲ့ အရွယ်ဆိုရင်တော့
နမ်းမိမှာပေါ့ :) ...
ဟုတ်တယ်ဗျို့..စကားပြောတတ်သော ဖားမလေး ဆိုပြီးရုံသွင်းပြရင်တော်တော်ချမ်းသာသွားလောက်တယ်..ဟီးဟီး:)
နမ်းပြီး တကယ့် မိန်းကလေး မဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလည်း...?
အဘိုးကြီးက သိနေတယ်နော်..မဖြစ်နိုင်တာကို။ ဒါကြောင့် ဥပါယ်တမျှင်နဲ့ ပြောလိုက်တာ..။
မဟုတ်လို့ကတော့... ယောကျာင်္းတွေပဲ..သိတယ်ဟုတ် !